Fampianarana ambony any Mahajanga : tsy nisy mpianatra noroahina tao Ambondrona | NewsMada
Fampianarana ambony any Mahajanga : tsy nisy mpianatra noroahina tao Ambondrona
Nitondra fanazavana ny mpitantana ny oniversite ao Mahajanga, ny alakamisy teo mikasika ny korontana voizin’ny mpianatra ao an-toerana mikasika ny filankevitry ny fitsipi-pifehezana na ny Codis izay nandraisana fanapahan-kevitra hentitra tamin’ireo mpianatra tsy refesi-mandidy.
Nohazavaina tamin’izany fa natao teo imason’ireo vadintany ny antsipirian’ny raharaha rehetra tamin’ny famoahana ny fanapahan-kevitra tao anatin’izany Codis izany. Nanomboka tamin’ny fifantenana ireo mpikambana mandrafitra ny Codis hatramin’ny fiantsoana ireo mpianatra niharan’ny sazy.
Nahitana ireo mpianatra, mpampianatra sy ny sampandraharaha ao amin’ny oniversite ny mpikambana tao amin’ny Codis.
Nanazava ny Dr Robelson Jean Sterah fa tsy nisy velively ny mpianatra noroahina. Nomena sazy ireo mpianatra amin’ny alalan’ny fampihatoana azy amin’ny fianarana ao anatin’ny fotoana voafetra. Anton’ny sazy ny tsy fanarahana ny fitsipi-pifehezana mifehy ny fampianarana ao amin’ny oniversite. Anisan’ny mavesa-danja ny fanimbana ny fananam-panjakana sy fandrobana….
Herisetra sy fanakorontanana
Marihina fa nahatratra 65 ireo mpianatra nandefasana fiantsoana hanatrika ny Codis kanefa ny efatra tamin’ireo ihany no nanatrika izany. Tao ireo nahazo sazy mihatona ary afaka nanatrika ny fanadinana ihany. Mihatra avy hatrany kosa ny sazy ho azy ireo raha misy hadisoana hataony. Nahazo sazy mihatra avy hatrany kosa ny sasany.
Efa herisetra sy fanakorontanana ny an’ireo mpianatra manao hetsika tsy am-piheverana ary tonga amin’ny fanakanan-dalana. Nanaraka ny an-tanan-tohatra rehetra ny fepetra noraisina ka tsy misy tokony hampitroatra ny mpianatra raha ny fanambaran’ny mpitantana ny oniversite.